iHome ဖိနပ်များ - iHome ► Shopping Time
မူလသို > ဖက်ရှင်>ကလေးများအတွက်>ဖိနပ်များ
ကုန်ပစ္စည်း 35 ခု ရှိပါသည်
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . ZFE 00000005) 1. လှပသေသပ် သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. သားသား မီးမီး တို့ အတွက် Style ကျစေမည့် ဖိနပ်လေးဖြစ်ခြင်း။ 3. အရုပ် ကလေး များဖြင့် ပုံဖော်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . BFE 00000000 1) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. လှပသေသပ် မူ့ ရှိခြင်း။ 3. ပေါ့ပါးသွက်လပ် ပြီး စီးရလွယ်ကူခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . BFE 00000000 1) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. ခြေညုပ်ဖိနပ် လေးဖြစ်သောကြောင့် စီးရလွယ်ကူခြင်း။
Baby Shoe (Spider Man)
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Spider Man) (Model No . BFE 00000000 4) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. ခြေညုပ်ဖိနပ် လေးဖြစ်သောကြောင့် စီးရလွယ်ကူခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . ZFE 0000000 1 ) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. သားသား မီးမီး တို့ အတွက် Style ကျစေမည့် ဖိနပ်လေးဖြစ်ခြင်း။ 3. လသားအရွယ် စီးဖိနပ်လေးဖြစ်ပါသည်။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . GFE 00000000 2) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. ခြေညုပ်ဖိနပ် လေးဖြစ်သောကြောင့် စီးရလွယ်ကူခြင်း။ 3. မီးမီး တို့ အကြိုက်ကာတွန့်အရုပ်ကလေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . ZFE 0000000 2) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. မီးမီး တို့ အတွက် Style ကျစေမည့် ဖိနပ်လေးဖြစ်ခြင်း။ 3. ဖိနပ် ၏ထိတ်တွင် ဖဲကြိုး ကလေး ဖြင့် ပုံဖော်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . GFE 00000000 1 ) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. မီးမီး တို့ အတွက် Style ကျစေမည့် ဖိနပ်လေးဖြစ်ခြင်း။ 3. ကာတွန့် အရုပ်ကလေး များဖြင့် ပုံဖော်ထားခြင်း။
Baby Shoe ( Disney )
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe ( Disney ) (Model No . GFE 00000000 1) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. အရောင် လဲ့လဲ့ လေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. မီးမီး တို့ အကြိုက် Snow White အရုပ်ကလေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . BFE 00000000 2) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. လှပသေသပ် မူ့ ရှိခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . GFE 00000000 1) 1. အရောင် စုံ လေးများဖြင့် လှပသေသပ်စွာပြုလုပ်ထားခြင်း။ 2. ခြေညုပ်ဖိနပ် လေးဖြစ်သောကြောင့် စီးရလွယ်ကူခြင်း။ 3. မီးမီး တို့ အကြိုက်ကာတွန့်အရုပ်ကလေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . BFE 00000000 3) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. လှပသေသပ် မူ့ ရှိခြင်း။ 3. ပေါ့ပါးသွက်လပ် ပြီး စီးရလွယ်ကူခြင်း။
Baby Half Shoe
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Half Shoe (Model No . BFE 00000000 5) 1. ကလေးများ အကြိုက် Batman အရုပ်ကလေးများနင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 2. လှပသေသပ် မူ့ ရှိခြင်း။ 3. ကြိုးပျောက် ဖြစ်သောကြောင့် စီးရလွယ်ကူခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Half Shoe (Model No . BFE 00000000 5) 1. ကလေးများ အကြိုက် Super Man အရုပ်ကလေးများနင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 2. လှပသေသပ် မူ့ ရှိခြင်း။ 3. ကြိုးပျောက် ဖြစ်သောကြောင့် စီးရလွယ်ကူခြင်း။
Baby Shoe ( Hello Kitty )
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe ( Hello Kitty ) (Model No . GFE 000000 8 ) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. မီးမီး တို့ အတွက် Style ကျစေမည့် ဖိနပ်လေးဖြစ်ခြင်း။ 3. အရုပ် ကလေး များဖြင့် ပုံဖော်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . BFE 00000 2) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. လှပသေသပ် မူ့ ရှိခြင်း။ 3. ပေါ့ပါးသွက်လပ် ပြီး စီးရလွယ်ကူခြင်း။
Baby Shoe (M I H)
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (M I H) (Model No . BFE 07000 3) 1. လှပသေသပ် မူ့ ရှိခြင်း။ 2. ပေါ့ပါးသွက်လပ် ပြီး စီးရလွယ်ကူခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . GFE 000000 7) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. မီးမီး တို့ အတွက် Style ကျစေမည့် ဖိနပ်လေးဖြစ်ခြင်း။ 3.ပန်းကလေး များဖြင့် ပုံဖော်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . BFE 0000000 3) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. လှပသေသပ် မူ့ ရှိခြင်း။ 3. ပေါ့ပါးသွက်လပ် ပြီး စီးရလွယ်ကူခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Shoe (Model No . GFE 00000 1) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. မီးမီး တို့ အတွက် Style ကျစေမည့် ဖိနပ်လေးဖြစ်ခြင်း။ 3. ကျောက်ကလေး များဖြင့် ပုံဖော်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Baby Half Shoe (Model No . BFE 0000000 5) 1. အကြမ်းခံ သည့်ဖိနပ် လေးဖြစ်ခြင်း။ 2. လှပသေသပ် မူ့ ရှိခြင်း။ 3. ပေါ့ပါးသွက်လပ် ပြီး စီးရလွယ်ကူခြင်း။